Nepal: Domestic workers raising their voices — English
You are here: Home / Updates / Nepal: Domestic workers raising their voices
112912282377538 Nepal: Domestic workers raising their voices https://idwfed.org/en/updates/nepal-domestic-workers-raising-their-voices
Nepal: Domestic workers raising their voices
by IDWFED — published Jan 15, 2015 01:00 PM
It's an interview in Nepali about Sonu Danuwar, Substitute Exco Member of IDWF, General Secretary of Home Workers Trade Union of Nepal.
Excerpt in Nepali:
घरेलु श्रमिक भन्नाले घरको काममा सघाउने श्रमिक भन्ने बुझिन्छ । मानिसमा व्यस्तता बढ्दै गएपछि घरको काममा श्रमिक राख्ने चलन बढ्दै छ । चाहे त्यो सुत्केरी स्याहार्ने काममा होस् वा घरको भाँडाकुँठा माझ्ने, लुगा धुने तथा खेतीपातीको काम सघाउनेनैं किन नहोस् । यस्तो श्रमिकको माग भने शहरमा बढी छ । अहिले यस्तो खालको श्रममा झण्डै दुई लाख महिलाले काम गरिरहेका छन् । तर घरेलु श्रमलाई कामको रुपमा नहेरिँदा र यस्ता श्रमिकको प्रयोग दिनानुदिन बढ्दै जाँदा समस्या पनि सँगसँगै उत्तिकै आउन थालेका छन् । यसै सेरोफेरोमा रहेर देशपरदेशका लागि विनोदकुमार चौलागाईले नेपाल गृह श्रमिक ट्रेड युनियनकी महासचिब सोनु दनुवारसँग कुरा गरेका छन् ।
अहिले घरेलु श्रमिकको अवस्था कस्तो छ ?
पहिलाको तुलनामा अहिले केहि सुधार भएको छ । उहाँहरु बाहिर निस्कन र हामीसँग जोडिन सक्नुभएको छ ।
घरेलु श्रमलाई कामका रुपमा अझै पनि स्विकार गरिसकिएको अवस्था छैन । तपाईहरुको लडाई भनेकै घरेलु श्रमलाई कामको पहिचान देउ भन्ने पनि थियो । के अहिले केहि परिवर्तन पाउनुहुन्छ ?
धेरै मान्छेले अहिले घरेलु श्रमलाई काम हो भन्न थाल्नुभएको छ । हामीले अहिले घरेलु श्रमिकलाई तालिम पनि दिन थालेका छौं । तालिमपछि उहाँहरुको काम गर्ने तौरतरिकानैं व्यबस्थित हुँदै गएको छ । यो पनि रोजगारीको एउटा क्षेत्र हो भन्ने भएको छ ।
काममा लगाउने मान्छेले तपाईहरुलाई कस्तो व्यबहार गर्नुहुन्छ ?
अहिले पनि घरेलु श्रमिकले दुःख पाईरहनुभएको छ । ‘ह्यारेस’ भईरहनुभएको छ । खासगरि उच्च वर्गमा घरेलु श्रमिकमाथिको दमन उच्च छ । मध्यमवर्गका परिवारमा भने समस्या कम भेटिन्छ । मध्यम वर्गका परिवार आँफैपनि कुनै न कुनै श्रम क्षेत्रमा लागिरहनुभएको हुन्छ । उहाँहरुले जसलाई घरेलु श्रमिकको रुपमा राख्नुहुन्छ उ पनि श्रमिक हो भन्ने बुझ्नुहुन्छ ।
उच्च वर्गका रोजगारदातामा त्यस्तो सोच हुँदैन । यो घरेलु श्रमिक हो भनेर मानवताको व्यबहार त्यहाँचैं हुँदैन । त्यस्ता घरमा काम गर्ने घरेलु श्रमिकको बाहिरको व्यक्तिसँग सम्पर्कनैं हुँदैन । घरभित्रमात्र सिमित हुनुपर्छ । स्वतन्त्रता भन्नेनैं छैन । संगठन विस्तार वा अरु कामका लागि हामीले उहाँहरुलाई भेट्न सम्भवनैं हुँदैन । स्कुलको बच्चा लिन आउँदा तथा किनमेलका लागि बाहिर निस्कँदा बाटोमा भेट भयो भनेपनि घरमालिकले देख्छकी भन्ने त्रासले कसैसँग कुरा गर्न चाहनुहुन्न ।
तर मध्यम वर्गका घरमा काम गर्ने घरेलु श्रीमकलाई कुरा गर्दा उहाँहरुले घरमैं बोलाउनुहुन्छ । आउनुस् अंकल/आंटीसँग सोध्नुस् भन्नुहुन्छ । तपाईहरु आएर बोलिदिनुभयो भने मलाई कार्यक्रम भएका बेलामा जान सजिलो हुन्छ भन्नुहुन्छ ।
उच्च वर्गका घरमा काम गर्ने घरेलु श्रमिक आँफैचैं यस्ता कुरालाई बाहिर किन ल्याउन चाहनुहुन्न ?
उहाँहरुमा एउटा त रोजगारी गुम्छ की भन्ने चिन्ता छ । अर्को भनेको उहाँहरु टाढा–टाढाबाट आउनुभएको हुन्छ । घरबाट निकालिदियो भने हामी जाने कहाँ भन्नुुहुन्छ । हामीले उहाँहरुलाई ‘तपाईहरु के गर्दा हामीसँग आउनुहुन्छ ?’ भन्दा त्यहाँबाट बाहिर निस्किएपछि अन्त काम नपाउञ्जेल एक/दुई महिना बस्ने ठाउँ पाए हामी पनि अगाडी आउँथ्यौं । धेरै साथीहरु पीडित हुनुहुन्छ त्यस्ता साथी पनि बाहिर निस्कनुहुन्थ्यो भन्नुहुन्छ ।
Read the original article in full: ‘उच्च वर्गमा घरेलु श्रमिकमाथिको दमन उच्च छ’ | DeshParadesh
« Previous: Namibia: Government passed the regulations relating to domestic workers Next: Ireland: It's official! Ireland ratifies the Domestic Workers Convention »